प्रकाश र बर्षा किन भन्दैछन् ‘हुन्छ भनन’ ? (भिडियो) « Ramailo छ
प्रकाश र बर्षा किन भन्दैछन् ‘हुन्छ भनन’ ? (भिडियो)
गायक डेविड शंकर र गायिका पूजा सुनुवारको स्वरमा ‘हुन्छ भनन’ बोलको गीत तयार भएको छ । एक साता अगाडी सार्वजनिक भएको यो गीतको भिडियोलाई दर्शक तथा श्रोताले रुचाइरहेका छन् । झण्डै पाँच लाख दर्शकले हेरिसकेको गीतको भिडियो यस्तो बनेको छ :
गीतमा शब्द तथा संगीत दिपक शर्माको छ । लोक आधुनिक डान्सिङ नम्वरको गीतमा नायिका तथा मोडल बर्षा राउत र गायक तथा मोडल प्रकाश सपुत फिचर्ड छन् । निर्देशक अनुप चापागाईंले भिडियोलाई उत्कृष्ट बनाउने कोशिस गरेका छन् । उत्सब दाहालको छायाँकन रहेको गीतको भिडियोलाई विकास दाहालले सम्पादन गरेका छन् । गायक शंकर र गायिका सुनुवारलाई पनि भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
सुपरहिट गीत ‘पहिलो नम्वरमा’का गायकले आफ्नो यो पछिल्लो गीतलाई पनि दर्शक तथा श्रोताले रुचाउने विश्वास राखे । ‘अहिलेसम्म पाएको दर्शकको साथ प्रतिक्रियाबाट हाम्रो निकै नै खुसी छ । आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछौं’, गायक डेविड शंकर भन्छन् ।